Pombi yemvura yeArduino: zvese zvaunoda kuti uzive | Mahara emahara
Pombi yemvura yeArduino: zvese zvaunoda kuti uzive
Isaac | | Arduino, Zvemagetsi zvigadzirwa
Zvirokwazvo pazviitiko zvakawanda iwe wakada bata zvinwiwa mune ako DIY mapurojekiti naArduino. Kuita kuti zviitike, vagadziri vane hombe yezvigadzirwa uye maturusi ekushanda nawo. Kare kare tinoratidza vane mukurumbira flowmeters, iyo yaunogona kudzora kuyerera kwemvura inopfuura nepakati pavo nenzira yakapusa. Ikozvino ndiko kuchinjika kwepombi yemvura ...
Uchishandisa izvo flowmeters Huwandu hwemvura inoyerera nepombi inogona kuyerwa kuidzora. Zvese zvekutenda kune yakapfava dunhu nezvinhu izvi nezvimwe inoenderana zvigadzirwa zvemagetsi naArduino. Ino ndiyo nguva yekuenda kumberi kuti ikupe mukana wekufambisa zvinwiwa, kuzadza / kubvisa matangi, kugadzira masisitimu ekudiridza, nezvimwe.
1 Chii chinonzi pombi yemvura?
2 Mitengo uye kupi kwekutenga
3 Pombi yemvura inoshanda sei
4 Sanganisa pombi yemvura neArduino
Chii chinonzi pombi yemvura?
Chaizvoizvo zita pombi yemvura haina kukodzera sezvo inogona zvakare kushanda nezvinwiwa zvisiri mvura. Chero nzira, pombi yemvura mudziyo unokwanisa kugadzira kuyerera kwemvura uchishandisa kinetic simba. Naizvozvo, ine zvimwe zvakakosha zvinhu:
Kupinda: panowirwa mvura.
Motor + Propeller: iye anotarisira kugadzira simba reinetic iro rinoburitsa mvura kubva mukati uye ndokutumira kuburikidza nekambani.
Buda: iko kudyiwa uko kunosimudzwa nemvura yesimba repombi yemvura.
Izvi hydraulic mabhomba iwo anoshandiswa zvakanyanya mune yakawanda mapurojekiti uye zvishandiso. Kubva kumaindasitiri, kumashini ekupa mvura, otomatiki madiridziro masisitimu, kusasafa kudiridza, masisitimu ekupa, zvirimwa zvekurapa, nezvimwe. Nechikonzero ichi, kune huwandu hukuru hwemamodeli pamusika, nemasimba akasiyana uye masimba (kuyerwa mumalita paawa kana zvakafanana). Kubva pane chidiki, kusvika kune chikuru, chemvura yakasviba kana yemvura yakachena, yakadzika kana pamusoro, nezvimwe.
Kana zvakadaro hunhu Iwo aunofanira kutarisa ndeaya:
Capacity: kuyerwa mumalita paawa (l / h), marita paminiti (l / min), nezvimwe. Ndihwo huwandu hwemvura iyo yaunogona kutora pane imwe nguva yenguva.
Maawa ehupenyu hunobatsira- Inoyera iyo nguva yenguva iyo yaingave ichimhanya ichienderera pasina matambudziko. Iyo yakakura iri, zvirinani. Iwo anowanzo kuve maawa mazana mashanu, maawa 500, maawa zviuru makumi matatu, nezvimwe.
Mhere: Inoyerwa muDB, ndiyo huwandu hweruzha rwainoita mukushanda. Izvi hazvina kunyanya kukosha, kunze kwekunge iwe uchida kuti zvinyarare. Pakadai, tsvaga imwe iine <30dB.
Kudzivirirwa: vazhinji vane IP68 dziviriro (iyo yemagetsi haina mvura), zvinoreva kuti vanogona kunyudzwa (amphibious mhando), saka vanogona kuve vari pasi pemvura pasina dambudziko. Zvimwe, kune rumwe rutivi, zviri pamusoro uye chete iyo inopinza chubhu inogona kunyudzwa mukati mayo iyo inopinza mvura. Kana asiri ekunyudza uye iwe ukaiisa pasi pemvura inozokuvara kana pfupi dunhu, saka teerera izvi.
Kumira kwakasimba: inowanzo kuyerwa mumamita, ndiko kukwirira uko mvura yacho yaigona kufambisa. Izvi zvinonyanya kukosha kana uchizoishandisa kukwidza zvinwiwa kusvika pakakwirira kana kubvisa mvura kubva mumatsime, nezvimwe. Inogona kuve 2 metres, 3m, 5m, nezvimwe.
Kushandiswa- Inopimwa mumawat (w) uye inoratidza huwandu hwesimba ravanoda kuti vashande. Muzviitiko zvakawanda zvinoshanda chaizvo, vanogona kuve nekushandisa 3.8W zvakanyanya kana zvishoma (kune zvidiki).
Yakagamuchirwa zvinwiwa: Sezvandamboreva, vanogamuchira akatiwandei emhando dzemvura, kunyangwe asiri ese. Kana iwe uchida kuve nechokwadi chekuti iyo pombi yaunotenga inogona kushanda neicho mvura chauri kuzobata, tarisa iyi yemagadzirirwo. Ivo vanowanzo shanda zvakanaka nemvura, oiri, acids, alkaline mhinduro, mafuta, nezvimwe.
Mhando yemotokari: Izvi zvinowanzo kuve DC magetsi emagetsi. Iyo isina bhurasho mhando (isina bhurasho) inonyanya kunaka uye yakasimba. Zvichienderana nesimba reinjini iwe unenge uine pombi ine yakawanda kana shoma simba uye yakasimudza kukwirira.
Rudzi rwepropeller: mota ine propeller yakabatana nemubato wayo, zvinova izvo zvinogadzira simba re centrifugal kubvisa mvura. Izvi zvinogona kuve zvemhando dzakasiyana, uye kumhanya uye kuyerera iko kunoshanda kwepombi kunoenderana nazvo. Ivo vanogona kutodhindwa vachishandisa 3D kudhinda nemhedzisiro dzakasiyana zvichienderana nechimiro chavo. Ini ndinokusiya inotevera inonakidza vhidhiyo nezvazvo:
Mamwe ruzivo mukati chinhu.
Caliber: iyo yekupinda uye yekubuditsa socket ine yakatarwa geji. Izvi zvakakosha kana zvasvika pakuenderana nemapombi auri kuzoshandisa. Nekudaro, iwe unogona kuwana maadapter emhando dzakasiyana dzakakodzera.
Peripheral vs centrifugal (radial vs axial): Kunyangwe paine mamwe marudzi, aya maviri anowanzo shandiswa kune izvi zvemumba zvinoshandiswa. Zvinosiyana zvichienderana nekuti propeller yakaiswa sei nemapanga, ichisunda iyo fluid centrifugally kana peripherally. (kuti uwane rumwe ruzivo ona chikamu che "Mashandiro anoita pombi yemvura")
Asi zvisinei nemhando uye mashandiro, nguva dzose inodzorwa nemagetsi. Nekudyisa mota inotyaira zvinofambisa kuti ibudise kinetic simba, mashandisiro avo anogona kudzorwa. Naizvozvo, mapombi madiki (kana makuru ane ma relays kana MOSFETs) anogona kushandiswa kugadzirisa hydraulic masisitimu neArduino.
Kana zviri zvekushandisa kwayo, ndanga ndambotaura mashoma. Asi funga kuti iwe unogona kugadzira rako rakareruka chirongwa neArduino. Semuenzaniso, pano ini ndinokusiya iwe chero mazano:
Mini-scrubber yakagadzirirwa pamba kuti udzidze mashandiro anoita zvirimwa zvekurapa.
Iyo bilge system inoona mvura kuburikidza ne sensor uye inoita kuti pombi yemvura idonhe.
Otomatiki chirimwa kudiridza system ine timer.
Kutamisa zvinwiwa kubva kune imwe nzvimbo kuenda pane imwe. Mvura inosanganisa masisitimu, nezvimwe.
Mitengo uye kupi kwekutenga
Pombi yemvura chishandiso chiri nyore, haina chakavanzika chakawandisa. Zvakare, kune € 3-10 iwe unogona buy mamwe emapombi akareruka emagetsi aripo eArduino, kunyange paine mamwe anodhura kana iwe uchida masimba akakwirira. Semuenzaniso, unogona kuva neizvi:
12v inonyudza pombi ine 240 l / h chinzvimbo uye 3m static kusimudza
12v UEETEK inonyudza pombi ine 10 l / min kugona uye 5m static kusimudza
240l / h inowira oiri uye mvura mini-pombi, iine 3m static kusimudza.
12V inonyudza pombi yemvura ine 5m static kukwirira uye 600 l / h.
24V inonyudza pombi ine static kukwirira kwe5m uye 1300 l / h.
Inopinza pombi ine 220 / 240v plug ine chinzvimbo che1500l / h uye 2m yekumira kusimuka.
Mini submersible pombi 2.5-6v 80-120 l / h
Ultra-yakanyarara mini pombi ine inosvika 3.5m kusimudza uye 7.5 l / min kugona
JOYKK micro pombi yemvura 2.5-6V ine huwandu hwe80-120 l / h
Pombi yemvura inoshanda sei
Pombi yemvura inoshanda nenzira yakapusa. Iyo ine propeller yakasungirirwa kumota, nokudaro ichichinjisa simba kune iro fluid rinopfuura nepakati payo mashizha, nokudaro richisunda iro kubva pachivako kuenda kune iyo nzira.
Mune avo axial mhando, iyo mvura inopinda mukamuri repombi uko iyo propeller iri pakati, ichiwedzera simba rayo rekinetic sezvo ichipfuura neicho chinhu chiri kutenderera nekumhanya kukuru. Ichazobuda mukamuri tangentially kuburikidza nekubuda.
En iyo radial, iwo mabheji anotenderera pamberi pechipinda chekupinda uye achasimudzira mvura kune iyo nzira sekunge iriri vhiri remvura. Aya ndiwo mafambiro avanofambisa mvura mune iyi imwe kesi.
Sanganisa pombi yemvura neArduino
Sezvaunoziva, iwe unogona zvakare kushandisa ataure kana uchichida. Asi pano, kubatanidza pombi yemvura neArduino ini ndasarudza MOSFET. Kunyanya module IRF520N. Uye nezve kubatana, chokwadi ndechekuti zviri nyore, zvakaringana tevera izvi zvinokurudzirwa:
SIG yeiyo IRF520N module ichave yakabatana neArduino pini, semuenzaniso D9. Iwe unotoziva kuti kana iwe ukachinja icho, iwe zvakare unofanirwa kushandura iyo sketch kodhi kuti iite kuti ishande.
Vcc uye GND yeiyo IRF520N module unogona kuvabatanidza ivo 5v uye GND yeako Arduino bhodhi.
U + uye U- Apa ndipo pauchabatanidza waya mbiri kubva papombi yemvura. Kana isina kubhadharwa mukati, mutoro unodzikisira, saka zvinokurudzirwa kushandisa diode rekudzokera pakati pese tambo.
Vin uye GND Ndipo pauchabatanidza raki nemabhatiri auchazoshandisa kusimbisa pombi yemvura kunze, kana bhatiri, magetsi kana chero chauchazoshandisa kuchipa ...
Mushure meizvozvo zvese zvaizounganidzwa uye zvakagadzirira kutanga ne sketch sosi kodhi. Kuti uite izvi, mu Arduino IDE uchafanirwa kugadzira chirongwa chakafanana neinotevera:
Mune ino kesi ingo vhura pombi uye zvinoita kuti ashandire 10 min. Asi iwe unogona kuwedzera imwe kodhi, maseru, nezvimwewo, uye nekuitonga zvichibva pakuburitswa kweiyo humidity sensor, uchishandisa nguva, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Zvemagetsi zvigadzirwa » Pombi yemvura yeArduino: zvese zvaunoda kuti uzive
1n4007: zvese zvaunoda kuti uzive nezve diode iyi
CTC 101: zvese zvaunoda kuti uzive nezve chirongwa ichi